Sida loo iPhone gebi ahaanba cad
Qaybta 1. Mid ka mid ah click in ay nadiifiso dhammaan macluumaadka kuqoran iPhone ah si joogto ah
Wondershare SafeEraser waa aalad ilaalinta gaarka ah ugu wanaagsan ee aad iPhone iyo qalabka macruufka kale. Haddii aad raadinayso software in masixi doonaa xogta shakhsiga ah sida farriimaha, abuse wac, iwm aad telefoon oo dhan, Wondershare SafeEraser waa qalab aad u. Waxa ay taageertaa dhammaan xogta ku saabsan qalabka ka soo xiriiro, fariimaha, sawiro, videos, barnaamijyadooda, warsan info, iyo sirta warbixinta qofka kale ku kaydsan qalab aad. Waxaa ugu wanaagsan ee loo isticmaalo tirtiro aad iPhone si joogto ah haddii aad rabto in aad iibiso ama u deeqdo.
Ka dhigaysa technology ayaa loo isticmaalaa in Wondershare SafeEraser waxaa suurto gal ah in ay gabi ahaanba tirtirto xogta shakhsiga ah oo aan fursadaha wax ka mid ah waxa ay ka soo kabanaya. Macna ma laha inta adag qof isku dayo inuu ka soo kabsado xogta tirtiray la Wondershare SafeEraser, iyagu ma guulaysan doonaan inay soo dhiciyaan wax.
Toos ah iyo user saaxiibtinimo interface
Dardar qalab aad
Weligaaba tirtirto macluumaadka
Dhammaan xogta user taageeray sida Chine, fariimaha, xiriirada, video, sawiro, macluumaad ku saabsan koontada, password, iyo in ka badan
Ilaali xogta aad mar walba
Hawadda Picture in ay sii daayaan meel dheeraad ah, laakiin ma waxyeelo tayada sawiro
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser in si joogto ah si cad iPhone
Talaabada 1: Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare by riixaya badhanka download kor ku xusan.
Talaabada 2: Isku aad iPhone iyo abuurtaan SafeEraser Wondershare.
Talaabada 3: Riix ikhtiyaarka ah "masixi All Data" mid ah kuwa kale ee suuqa kala muhiimsan ee SafeEraser.
Talaabada 4: Nooca 'tirtirto' si loo xaqiijiyo doorashada iyo riix 'masixi Hadda' badhanka hoose si ay u bilaabaan.
Wondershare SafeEraser haatan bilaabi doonaan in ay masixi aad iPhone. Hubi in aad aad iPhone ku xiran si aad u computer oo dhan nidaamka.
Marka nidaamka dhamaato, waxaad arki doontaa shaashad dhameystirtay sidii la arkay sawirka hoos ku qoran.
Qaybta 2. Sida loo kala cadeeyo 'kale' on iPhone
Kale waa kaydinta ah arkay in iPhone marka uu wax ku xiran Lugood. Waxaa ku jira xogta khasnado, cookies iyo macluumaad kale oo ka Chine oo dhan. Waxaa degan qaar ka mid ah oo ku saabsan iPhone iyo dadka isticmaala kaydinta kaydinta badan oo aan u baahan doonaa inuu cadeeyo si ay u helaan kaydinta dheeraad ah.
Si kale oo ku saabsan iPhone, raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Talaabada 1: kaabta aad iPhone la Lugood.
Talaabada 2: Dib u celi aad iPhone by tirtiro content oo dhan iyo goobaha ay u socdaan si Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings.
Tallaabo 3: Ka dib markii ay dib u dhamaato, xiriiriyaan iPhone si aad u computer iyo soo celinta aad gurmad isticmaalaya Lugood.
Qaybta 3. Sida loo kala cadeeyo Maps on iPhone
Talaabada 1: ka screen guriga fur app Khariidadaha.
Talaabada 2: Tubada bar raadinta sare ee app iyo garaac ugu cadcad.
Talaabada 3: Tubada badhanka oo nadiif ah hogaanka tagay in ay nadiifiso khariidado aad.
Qaybta 4. Sida loo kala cadeeyo boostada on iPhone
Boostada waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee iPhone ah. Waxaad heli emails aad xaq aad iPhone oo aan u baahnayn in la isticmaalo kombiyuutarka. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad tirtirto emails gaar ah ama xataa ay nadiifiso boostada qaar ka mid ah sababaha shakhsi ahaaneed.
Si aad sanduuqa boostada ee iPhone, raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo.
Talaabada 1: fur app Mail oo taga si aad mailkooda. Tubada edit iyo calaamadee dhammaan mails sida akhriyo.
Talaabada 2: Tubada edit doorasho mar kale iyo email ugu horeysay ee mailkooda ka jaftaa. Press iyo hay badhanka dhaqaaqo aad suulka hoose ee shaashadda. Inkasta oo haysta button dhaqaaqo, uncheck email aad hore hubiyaa iyo sii daayo button dhaqaaqo.
Talaabada 3: screen dhaqaaqo A muuqan doona meesha aad qayb weyn dhaqaajin karin emails aad. Ka emails loo doortay in ay folder Trash dhaqaaji. Si joogto ah u tirtirto emails ka, furo folder qashinka iyo tirtirto dhammaan emails ku dhex jira.
Qaybta 5. Sida loo kala cadeeyo Calendar on iPhone
Talaabada 1: ka screen guriga fur app Calendar ah.
Talaabada 2: Tubada jadwalka hoose ee app.
Talaabada 3: Hadda ka jaftaa on edit dhinaca biddix ee kore ee app.
Dooro jadwalka aad rabto in aad tirtirto oo 'Calendar tirtirto' ka hoose ee app ka jaftaa.
Gebi Clear iPhone Video Tutorial
20 dareenka in iibso isticmaalay iPhone ah
Sidee loo nadiifiyaa Apps 'Data ka iPhone ah
Sidee Waxaad masixi iPhone ah joogto ah?
Sida loo Cad Cache ku iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus
Nadaafadda Your Phone la One Click
Sida loo joogto ah Delete fariimaha qoraalka ka iPhone
Siyaabo Sahlan ee Delete Songs on macruufka 7
> Resource > masixi > Sida loo iPhone gebi ahaanba cad